भोलि टीकाको दिन सेनाले निःशुल्क बस चलाउने ! – Life Nepali
भोलि टीकाको दिन सेनाले निःशुल्क बस चलाउने !
काठमाडौं १७ असोज , विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्षको टीकाको दिन नेपाली सेनाको बसले निःशुल्क रुपमा यात्रु बोक्ने भएको छ ।दशैंका दिन सार्वजनिक सवारी कम चल्ने भएका कारण सर्वसाधरणलाई टीका लगाउन आउजाउ गर्न सहज होस भनेर सेनाले निःशुल्क रुपमा सेवा दिन लागेको हो ।सेनाले असोज २१ गते टीकाका दिन काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन न्यून मात्र सञ्चालन हुने भएकोले सैनिक तथा गैरसैनिक व्यक्तिहरुको आवागमनमा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले बस सेवा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सेनाले उपत्यकाका विभिन्न सात वटा रुटहरुमा यी समयमा निःशुल्क बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । यता टिकटमा भने अनुसार बस नपाएको भन्दै यात्रुहरुले आज (शनिबार) विहान काठमाडौं खुलामञ्चमा तो’डफो’ड गरेका छन् । आ’क्रोशित यात्रुहरुले खुलामञ्चमा राखिएको अ’स्थायी रेलिङ समेत भाँ’चि दिएका छन् ।शनिबार बिहान यात्रुले ना’राबाजी गर्दै आफूहरुलाई दुः’ख दिएको भन्दै तो’डफो’ड गरेका हुन् । अहिले यात्रुलाई स’म्झाएर अ’वस्था सा’मान्य बनाइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
दशैं मनाउन २० लाख ब’ढी मानिस काठमाडौबाट बाहिरिएका छन् । शनिबारदेखि सरकारी कार्यालय बि’दा भएकाले धेरै जना शुक्रबार बेलुका र शनिबार बिहान घर गएका छन् ।शनिबार तीन ३ लाखको हा’राहारीमा यात्रु बा’हिरिने स’म्भावना रहेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । गएको २४ घण्टामा दुई लाख ९६ हजार ६ सय ९२ जना काठमाडौबाट बा’हिरिएका छन् ।नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यात्रुका लागि बसको स’मस्या नहुने दा’बी गरेको छ । शनिबार धेरै मानिस बा’हिरिने भएकाले बस व्य’वस्थापन गरेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी गराएका छन् । तर यात्रुले भने टिकट र सिट पाउन समस्या भएको गु’नासो गर्दै आएका छन् ।
Previous रोशनीले बनाइन कृष्णको जीवन अ’न्धकार
Next आज विजयादशमी, १०ः३५ बजे टीकाको उत्तम साइत